किन सधैँ ‘कुल’ देखिन्छन् धोनी? – Khabar Silo
काठमाडौं– विश्व क्रिकेटको विरासतमा ‘क्याप्टेन कुल’ तथा ‘आइस म्यान’का रुपमा परिचित छन् पूर्व भारतीय कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी। धोनीको खेल्ने शैली तथा हालसम्म तय गरेको यात्रा र उचाइ जुनरुपमा धेरैका लागि प्रेरणादायी छ, उनको व्यक्तित्वको प्रभावसमेत धेरैमा गाढा गरी परेको छ।
अझै यसो भनौं- जसरी उनको खेल्ने क्षमताबारे चर्चा/परिचर्चा हुनेगर्छ, मैदानमा या मैदान बाहिर पनि उनको व्यवहार र व्यक्तित्वसमेत चर्चाको केन्द्रमा रहने गरेको पाइन्छ। तर, यस्तो चर्चालाई अधिकांशले सह्राहनाको शैलीमा व्यक्त गरेको सुनिन्छ।
आखिर धोनी मैदानमा या बाहिर पनि किन यति भद्र र शालीन देखिन्छन् त? के उनलाई रिस उठ्दैन? उठ्छ भने खास उनीमा के चिज छ, जसले रिस, आवेग वा आक्रोशलाई आफूभित्रै दबाइरहन मदत गर्छ?
कठिन परिस्थितिमा चाल्नुपर्ने आगामी कदममा ध्यान केन्द्रित गर्दा उनलाई आफ्नो भावनामाथि नियन्त्रण राख्न सहयोग मिल्ने रहेछ।
केही महिनाअघि मात्रै भएको एकदिवशीय विश्वकपको अन्तिम ४ बाट बाहिरिएपछि धोनीले आफ्नो स्वभावबारे पहिलोपटक केही प्रकाश पारेका थिए।
विश्वस्तरमा सम्भवतः सबैभन्दा तीक्ष्ण र परिस्थितिको परख गरी कदम चाल्ने दिमाग भएका खेलाडीमध्येका एक धोनीलाई थाहा छ कि कठिन अवस्थामा आफू वा टोलीका अन्य साथीलाई कसरी दबाबबाट बाहिर ल्याउने। जबजब यस्ता कठिन अवस्थालाई फर्केर हेरिन्छ, यस्तो बेला उनले आफ्नो उच्च क्षमता प्रदर्शन गरेको उनको करियरलाई फर्केर हेर्दा स्पष्ट हुन्छ। जुन समय अधिकांश अवस्थामा उनी मात्रै होइन टोलीले समेत सफलता आत्मसाथ गरेको छ।
सन् २०११ आफ्नै भूमीमा पहिलोपटक तथा समग्रमा दोस्रोपटक (पहिलोपटक कपिलदेवको कप्तानीमा भारत सन् १९८३ मा विश्वविजेता बनको थियो) भारतलाई विश्वकपको उपाधि दिलाउने क्रममा धोनीले नै कप्तानी पारी खेलेपछि सहआयोजक समेत रहेको श्रीलंकालाई पाखा लागाएको थियो। उनले त्यतिबेला बनाएको ७९ बलमा अविजित ९१ रन होस् या सन् २०१३ को च्याम्पियन्स ट्रफीको फाइनलमा कम लक्ष्य दिएको अवस्थामा पनि बलहरुलाई सटिक ढंगबाट चलायमान बनाइ ट्रफी हत्याउँदा (२० ओभरमा १ सय ३० रनको लक्ष्य दिएकोमा इंग्ल्यान्डलाई भारतले उसकै भूमीमा १२४/८ कै अवस्थामा रोकेको थियो) होस्, धोनीको यस्तो क्षमता धेरैपटक दोहोरिएका छन्।
उनी यस कुरालाई भने स्वीकार गर्छन् कि भारतीय क्रिकेट टोलीका अन्य सदस्यभन्दा उनी आफ्ना भावनालाई राम्रो तवरबाट नियन्त्रणमा राख्न सक्छन्।
आखिर यसभित्रको अन्तर्य के छ त? आउनुहोस् धोनीकै शब्दमा बुझौं-
‘मलाई पनि धेरैपटक रिस उठ्छ, निराश भइरहेको हुन्छु, आखिर म पनि सबैजस्तै मानिस न हुँ। तर, अन्य साथीभन्दा मैले केही बढी आफ्ना भावनालाई नियन्त्रण भने गर्नसक्ने रहेछु। तर, यो महत्वपूर्ण छ कि रिस, आक्रोश, आवेग या बदला, यस्ता कुनै पनि भावना रचनात्मक हुँदैनन्।’
क्रिकेटका तीनवटै फर्म्याटमा गरी कूल ५ सय ३८ खेल खेलिसकेका धोनी थप्छन्, ‘भावनाभन्दा पनि तत्कालै के गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ।’
‘मैले अब बनाउनुपर्ने नयाँ रणनीति के हो? आगामी समयमा मैले प्रयोगमा ल्याउन सक्ने उपयुक्त व्यक्ति को हुनसक्छ? जब एकपटक म यसबारेको सोचमा समाहित हुन पुग्छु, तब मैले मेरा भावनालाई सहज तवरबाट नियन्त्रण गर्नसक्छु।’
‘यदि टेस्ट म्याच खेल्नुपर्नेछ भने तपाईंसँग २ पारी हुन्छ, तपाईंलाई आफ्नो आगामी रणनीति बनाउन केही बढी समय मिल्छ। खेल यदि टी-२० को छ त तपाईंसँग सोच्न निकै कम मात्रै समय रहन्छ, त्यसकारण यस्तो अवस्थामा भने फरक रणनीति आवश्यक पर्छ।’
‘गल्ती गर्ने मैदानमा एक मात्रै खेलाडी हुनसक्छ वा पूरा टिम नै। सायद हामीले सटिक रणनीति नै अख्तियार गर्न नसकेका हुनसक्छौं, चाहे जुनसुकै प्रारुपको खेल होस्। एउटा टोलीको रुपमा जो हासिल गर्न चाहनुभएको छ, त्यो प्रतियोगिता जित्ने नै हो। तर, यो दीर्घकालीन लक्ष्य हो। अन्ततः तपाईं जे गर्न खोज्नुहुन्छ, त्यसलाई सानो कुरामा तोडिदिनुहुन्छ।’
भारतलाई सन् २००७ मा भएको पहिलो तथा सबैभन्दा कान्छो फर्म्याटको विश्वकपको उपाधी दिलाउने पहिलो कप्तान हुन् धोनी। चिरपरिचित प्रतिद्वन्द्वि पाकिस्तानलाई समूह चरणमा ‘बलआउट’ नियमका आधारमा हराउँदा उनको नेतृत्वलाई धेरैले सम्झिन्छन्। कतिपयले धोनीलाई फरक अवस्थामा आइपर्ने विभिन्न भूमिका तथा जिम्मेवारीलाई सहजै निभाउनसक्ने सीमित व्यक्तिको उदाहरणका रुपमा लिने गर्छन्।
‘सो विश्वकप केही कुराका लागि खास थियो, जसमध्ये धेरैका लागि नयाँ थियो ‘बल आउट,’ उनले पुरानै दिनमा फर्किँदै भने, ‘मलाई अझै पनि याद छ कि हामी प्रत्येक दिन अभ्यासका लागि जान्थ्यौं। तर, प्रत्येक अभ्यास सत्रको अघि या पछि हामी ‘बल आउट’को आभ्यास गर्थ्यौं। सो क्रममा हामीले सबै खेलाडीलाई भनेका थियौं कि यो सबै रमाइलोका लागि मात्रै हो। तर, यसक्रममा जसले सबैभन्दा बढिपटक स्टम्पमा प्रहार गर्नसक्छ, आवश्यक परेको खण्डमा उसलाई उपयोग गर्न सकिनेछ।’
‘यसका लागि म बलर नै हुनुपर्छ भन्ने अनिवार्य थिएन, मात्र आवश्यक थियो यो मेरो अभिभारा हो भन्ने भावना। भलै अभ्यासका क्रममा होस्, यो पनि प्रदर्शनकै रुपमा रहन्छ र हामी दिनहुँ यस्तो अभ्यास गर्नेछौं। यसक्रममा जसले सबैभन्दा बढी सटिक निशाना लगाउन सक्छ, उनीहरु नै आवश्यक परेको खण्डमा प्रयोगमा आउँनेछन्।’
‘अन्ततः जित या हार टोलीमा आवद्ध प्रत्येकका हकमा लागू हुन्छ। टोलीले खेल्ने खेलमा हर कोहीको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका र जिम्मेवारी रहन्छ। टी-२० विश्वकपको दौरानमा प्रत्येक खेलाडीलाई दिइएको भूमिका तथा जिम्मेवारी उच्चतम ढंगबाट बहन भएको थियो। यही कारण थियो कि हामी विश्वविजेता बन्यौं।’
(आइसिसीको वेबसाइटमा प्रकाशित यस समाग्री विमर्श कँडेलले भावानुवाद गरेका हुन्।)
काठमाण्डौ – वुमन्स च्याम्पिन्यस लिग क्रिकेटमा क्याट क्वीन्स काठमाण्डौले तेस्रो जित निकालेको छ । शनिबार काठमाण्डौले विराटनगरलाई ५३ रनले पराजित गरेको हो । विराटनगरको भने यो पहिलो हार हो । काठमाण्डाैले दिएको १४० रनको लक्ष्य पछ्याएको विराटनगरले निर्धारित ओभरमा ५ विकेट गुमाएर ८७ रन मात्रै बनाउन सक्यो । विराटनगरका लागि लक्ष्मी चौधरीले सर्वाधिक ४० रन […]
साउथह्याम्पटनविरुद्ध लिभरपुलको शानदार जित
काठमाडौं – इन्ग्लिश प्रिमियर लिग फुटबलमा लिग लिडर लिभरपुलले मोहमद सल्लाहको २ गोलको मद्दतमा साउथह्याम्पटनबिरुद्ध शानदार जित निकालेको छ । शनिबार राति भएको खेलमा लिभरपुलले साउथह्याम्पटनलाई ४-० गोल अन्तरले पराजित गरेको हो । घरेलु मैदानमा पहिलो हाफ गोलरहित बराबरी खेलेको लिभरपुलले दोस्रो हाफमा गोलको बर्षा गरेको थियो । खेलको ४७ औं मिनेटमा एलेक्स च्याम्बरलिनले गोल […]